Ebe ị ga-Atụmatụ maka ntụrụndụ na njem nleta aga Holm district.
Ụbọchị Mọnde na Holm Vallen. Arr. PRO Holm, Olle Frisk 073-048 45 11.
Common ejegharị maka afọ niile (bụzi ihe mgbe ochie – ya na agba ntụ)
(Ugbu a ọ dịghị ọrụ) Collection site Holm mkpọda. Da gị onwe picnic ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
nhazi PRO Holm.
– Fotbollslek / Ọzụzụ na Holm Vallen (oyi / mmiri na Lidén) maka ụmụaka a mụrụ 2008 na ndị okenye.
..Lee na-enweghị uche otu onwe website na a ọzụzụ oge, wdg: laget.se/knattar.
– Seniorfotboll. A otu na-arụ ya hemmamacther na Holm Vallen i Anundgård na ọzụzụ banyere 2 ggr./vecka alternately na Sundsvall (oyi) na Holm (n'oge okpomọkụ).
nhazi Holm Sportklubb, gụkwuo ebe a.
Noo na-eme ihe na Gimåfors (emelitere 150212)
– Vävcirkel, ụbọchị Mọnde 18:00. Info: Margit 0691 - 400 11.
– Food na azụ, Tuesdays 11:00. Info: Gunvor 0691-204 45.
– poselin, tis 18:30 na òtù ezinụlọ 11:00. Info: Sonja 0692-510 51.
– Stick- na ịkwa nkà gburugburu, Tuesdays 18:00 Info: Margit 0691-400 11.
– Tenis / Wellness, Tuesdays 18:00. mnfo: Ingemar 070-335 50 99.
The ugboro na-abụghị na ọ bụla omume a hazie na otu ụbọchị na oge na Gimåfors.
Study gburugburu i Anundgård (n'ụzọ zuru ezu gbaa akwụkwọ oyi -15, aha mmasị maka na o kwere omume. ọzọ ohere)
– Fitness na ahụ ike n'ihi na ndị inyom, Sun 18:00. Info: HSK, Gunilla na Maria 070-669 78 34.
Times na ụbọchị ga-agbanwe. Kpọọ ma ọ bụ kpọtụrụ maka ihe Ama.
Fishing – Na Holm si fishery nchekwaba ebe awade a dịgasị iche iche nke ohere maka ịkụ azụ. Site Pike na angling maka egwuregwu azù nke nanị “tinye na-”-mmiri.
ụgbọ mmiri, ụsụ na Mmiri – Nọ n'ógbè mmiri na-ukwuu ohere maka ntụrụndụ ndị na-ekpori ndụ na oké osimiri. Na karịsịa Holmsjön dị mma ohere maka igwu n'ọtụtụ ebe na aja osimiri. E nwekwara a map nke ọdọ si dị iche iche n'ihi na ndị magburu onwe.
Kanotuthyrning – Dọwa canoes na ụgbọala na-adọkpụ na-a leisurely siri na anyị mara mma mmiri.
Jaktskyttebana – Nọgidenụ na égbè iji ịchụ Holm Ịchụ nta riffle na Vike.
Motions- na ski- – Omumu Holm Wallen na Vike elljusspår, okpomọkụ na oyi.
Allbergsbacken – Holms elbelysta pulk- na toboggan. Open ọ bụla n'ụbọchị izu!
Vettenbacken – The obodo ezinụlọ mkpọda maka Alpine mmasị na abụọ lifts na mkpọda ukwuu. A ejikwu na obere bolder piste.
N'obere ụgbọala na ọgba tum tum – Draka ugwu ahụ na n'obere ụgbọala Club-ekwusi oké n'obere ụgbọala ụzọ ụkwụ gburugburu gburugburu e Holm district. Na ha, i nwere ike ịkọrọ gị n'obere ụgbọala- na MC mmasị na-enweta ihe ọmụma banyere edu, na ndị ọzọ.
Ntoonu nke Österström – Jeenụ ije na sinik gburugburu ebe obibi jupụtara echeta nke ochie na-akwọ osisi na oge. Österströms Estate na-enye na-eme otú ahụ dị ka afọ, gudningar na sawụna agụụ mmekọ.
Active Teter on Sandsnäsets Camping – On Sandnäset ogologo aja beach awade bụghị nanị na igwu mmiri, maa ụlọikwuu, ma a ọnụ ọgụgụ nke dị iche iche n'ọrụ ether. Gịnị mere na-agbalị ugboelu na Holm Sea ebili mmiri!?
Were a njem TIVSJÖ ewu ma na-ekiri nwamba na kittens, umu-ehi, getter, ezì, nweta, okuko, òké bekee, ịnyịnya, turkeys, ọbọgwụ na a minipig. Ebe a na-summercafé, nkà ihe ngosi na ohere ịzụta ewu cheese ma ọ bụ gettvålar. Maka ibu dose of obodo ndụ, ị nwere ike dọwa ohere na-isi nri / full osisi na sawụna, ụgbọ mmiri na-eji ụgbọ epeepe thereto.
More na-adọrọ mmasị nwere ike na holmshembygdsforening.se
Na akụkọ ihe mere eme mmadụ na-ọzọ nlegharị anya kọwara. Tinyere ihe ndị ọzọ nyupprustade Storsten boathouses. A ugwu ịta nri nke isii cottages na ọba-akpa site na mmalite 1800s. E nwere ike ime ịgbazite ma cottages, Eldhus na rafti.
Biko zitere aro na njikọ ị chọrọ ebe a.